भारतीय सेनाको भर्ती: युवाहरूलाई रातभर बाटिका होटलमा राखेर ३८ लाख असुलियो — Paschimnews.com News From Nepal
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/२/२६ गते
२० जेठ मध्यराति नेपालगन्जको होटल वाटिकाबाट भारतीय सेनामा भर्ती गराइदिने भन्दै लिएको ३८ लाखसहित सात जनालाई प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गर्‍यो।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शी नेपाल भूतपूर्व सैनिक समितिका बाँके जिल्ला अध्यक्ष भीम रानाका अनुसार प्रहरीले होटलको १०२ नम्बर कोठाबाट चितवनका रामकाजी पाण्डे, पोखराका सुजाता पाठक र शर्मिला अधिकारीबाट ६ लाख ५० हजार, १०४ नं. कोठामा बसेका पोखराकै अर्जुन पौडेलबाट २६ लाख ५० हजार र १०६ नं. कोठाबाट रुपन्देही तिलोतमा नगरपालिकाका नीरबहादुर थापाबाट ५ लाख गरी ३८ लाख रंगेहात फेला पार्‍यो।
घुसमा संलग्न भएको अभियोगमा पोखराका एकबहादुर गुरुङ र सूर्यबहादुर थापालाई पनि नियन्त्रणमा लियो।
‘लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र आउट गर्ने नाममा एक जना ब्यक्तिबाट एक लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँ लिएको पाइयो’, अध्यक्ष राना भन्छन्।
नेपालगन्जको कारकाँदोस्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा जेठ १६–२१ सम्म चलेको छनोटमा ८ सय ९६ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए। वाटिका होटलमा खान तलासी गर्दा प्रहरीले अभियुक्तहरूबाट नगदसहित ८५ वटा मोबाइल पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो।
भर्ती हुन आएका युवाले पैसा बुझाएपछि मोबाइल कब्जामा लिएको आशंका छ। पैसा बुझाउनेमध्ये धेरैले २/२ लाख दिएको बताएका छन्। कतिले तीन लाख त कतिले पाँच लाखसम्म पनि बुझाएका छन्। औसत तीन लाखका दरले हिसाब गर्दा ८५ जनाबाट मात्र कम्तीमा पनि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ असुलेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
भोलिपल्ट बिहान ८ बजे हुने लिखित परीक्षको तयारी छोडेर वाटिका होटलको हलमा मध्यरातिको १२ बजेसम्म झन्डै चार पाँच सय युवाहरू रहेकाले सबै पैसा बुझाउन आएको आँकलन गर्न सकिन्छ।
परीक्षा दिएकामध्ये ४ सय ४७ जना मात्र पास भए। पास हुने सबैले तीन लाखका दरले बुझाएको भए पनि १३ करोड भन्दा बढी रकम असुलेको आँकलन गर्न सकिन्छ। ‘त्यो रात १० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेछ। एउटा गाडीसहित केही व्यक्ति भागेकाले सबै रकम समात्न सकिएन’, रानाले भने।
यो घटनापछि भारतीय सेनाको भर्तीमा आर्थिक चलखेल हुने खुलासा भएको हो। नेपालदेखि गोरखपुरसम्मको छनोटको कनेक्सन हुने समितिले आशंका गरेको छ।
थापा भन्छन्, ‘लिखित परीक्षामा प्रश्नपत्र आउट गर्दा एक लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ असुली हुन्छ। भारतको गोरखपुरमा हुने मेडिकलमा उत्तीर्ण भएपछि कम्तीमा ५ लाख अर्को असुलिन्छ। भारतीय सेनामा भर्ती हुन कम्तीमा पनि ८ लाख रुपैयाँ लाग्ने परीक्षार्थी र तिनका अभिभावकबाट खुलेको छ। यस्तो चलखेलमा पूरै सयन्त्र नै सक्रिय नभइ सम्भव छैन।’
भारतीय सेनामा भर्तीका लागि देशका प्रमुख सहरमा भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूकै लगानीमा तालिम केन्द्रहरू खुलेका छन्। सुरुमा तालिमका नाममा असुली हुन्छ। भर्ती हुन आउँदा उनीहरूबाट फेरि असुली हुन्छ।
पक्राउ परेका ७ जनामध्ये दुई महिलाबाहेक सबै भूतपूर्व सैनिक र तालिम केन्द्र चलाउने ब्यक्ति रहेको प्रहरीले जनाएको छ। समितिलाई गत वर्ष नेपालगन्जको छनोटमा कोहलपुरमा आर्थिक चलखेल भएको सूचना आएको थियो तर रंगेहात पक्राउ गर्न सकेको थिएन।
पोखराको छनोटमा पनि पैसा लेनदेन भएको चर्चा चलेको थियो। ‘हामी प्रमाणको खोजीमा थियौं। त्यसैले यो वर्ष भूतपूर्व सैनिकलाई नेपालगन्जका होटलमा राखेर सर्च अभियान सन्चालन गर्दा फेला पारेका हौं’, उनले प्रष्ट पारे।
भारतीय सेनामा ४२ हजार नेपाली भर्ती भएका छन्। नेपालमा पाँच ठाउँमा भर्ती लिइन्छ। प्रदेश ५ को नेपालगन्ज र बुटवल, प्रदेश ३ को चितवन, प्रदेश १ को धरान र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भर्ती लिइन्छ। हरेक वर्ष कम्तीमा एक पटक वा आवश्यकता अनुसार दुई पटक पनि भर्ती लिइन्छ। एक ठाउँमा छनोट भएको ठीक डेढ महिनापछि अर्को सहरबाट छनोट गर्ने समितिले जनाएको छ।
भर्ती हुन आएका दुई जना युवाले दिएको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले भारतीय सेनाको भर्ना छनौटमा प्रश्नपत्र आउट गर्ने नाममा ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दाको तयारी गरेको छ।
जिप्रका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश सापकोटा भन्छन्, ‘भर्ना छनोटमा सहभागी व्यक्तिलाई लिखित परीक्षामा आउने प्रश्नपत्र आउट गर्ने भन्दै होटल बाटिकाको हलमा बोलाइ नगद एक लाखका दरले रकम उठाइ ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नलाई ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ।’
नेपाल भूतपूर्व सैनिक समितिले बाँके प्रहरीले कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको र अभियुक्तहरूलाई जोगाउने गरी मुद्दा प्रक्रिया थालेको भन्दै शनिबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेको थियो। संघका अध्यक्ष रानाको प्रहरीसँग माग छ, ‘भारतीय सेनामा भर्ती हुन एक पैसा तिर्नु पर्दैन। ठूलो रकम चलखेलको प्रमाणसहित पेश गर्दा अभियुक्तलाई कारबाही हुनुपर्छ। कहिं कतैबाट उन्मुक्ति दिने काम गर्नु हुन्न।’
नेपालगन्जमा हायसको ठक्करबाट महिला गम्भिर घाइते, नाम ठेगाना खुल्न बाँकी
कोहलपुरलाई आज साक्षर घोषणा गरिदैः २० लाख भन्दा बढी खर्चको अनुमान